Homerun: Unitydị n'otu na KDE | Site na Linux
Fọdụ ndị mmepe KDE mepụtara ọrụ akpọrọ Launcher Ọsọ ụlọ, iji mụta nwa na functionalities nke Ịdị n'Otu ma ọ bụ ihe omume GNOME na KDE.
Ekele Homerun ọ ga-ekwe omume ịchọgharị na ngwa arụnyere ma bido ha ma ọ bụ tinye ha na ndepụta ndị ọkacha mmasị ma nweta ha ọsọ ọsọ site na ibe ụlọ.
Homerun depụtara ebe / folda anyị masịrị anyị ma nye gị ohere ịchọgharị ha. Na ịpị otu ihe na mpaghara "Ebe Ọkacha mmasị" ga-edepụta ọdịnaya nke folda a. Ya mere, anyị ga-enwe ike ịnyagharịa site na folda iji mepee akwụkwọ na-enweghị iji njikwa faili.
:Lọ: ngwa na folda anyị
Ngwa: e mejupụtara mmemme ahụ n'ime otu.
Documents: na nso nso a na-eji folda na akwụkwọ
Ike: site ebe a anyị nwere ike ịgbanwe onye ọrụ, pụọ, weghachite ma ọ bụ gbanyụọ kọmputa ahụ.
sudo tinye-apt-repository ppa: bulu-shei / homerun
sudo apt-nweta wụnye homerun
En Arch na nkwekọrịta:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Homerun: Unitydị n’otu na KDE
M nwere ya arụnyere na ndabara na Netrunner ma amaghị m ihe kpatara na mgbe mbụ m malitere usoro; mgbe m metụrụ ya aka na nke mbụ ọ na-atụgharị m na desktọọpụ nke abụọ, m ga-emechi ma mepee desktọọpụ mbụ wee nye ya nsogbu ahụ ọzọ. Echiche ọ bụla?
Echiche m gbasara ile anya na mmetụta nke Libreoffice